Apple ကို ဖဲ့ထားတဲ့ ဗီဒီယိုတစ်ခုနဲ့ “တကယ့် AI ဖုန်းအစစ်” ကို နောက်လထဲ မိတ်ဆက်သွားမယ်လို့ ကြေငြာလိုက်တဲ့ Huawei
visibility 38860 Views
Apple ဟာ သူတို့ရဲ့ iPhone ဆယ်နှစ်မြောက်အဖြစ် iPhone X ကို မိတ်ဆက်ခဲ့တုန်းက FaceID စမ်းသပ်ပြရာမှာ နည်းနည်းအလွဲလွဲအချော်ချော်လေးတွေ ဖြစ်သွားခဲ့တာ ပူပူနွေးနွေးပဲ ရှိပါသေးတယ်။ ဟုတ်ကဲ့၊ iPhone အပါအဝင် Biometric Authentication သုံးထားတဲ့ ဖုန်းတိုင်းဟာ Restart ချပြီးရင် Passcode ဝင်ပေးဖို့ လိုတယ်ဆိုတာ ကျနော်တို့ သိပါတယ်။ Apple ရဲ့ ဖြေရှင်းချက်ကို ဖတ်ပြီးလောက်ပြီလို့လည်း ထင်ပါတယ်။
ဒါပေမယ့် ပြီးခဲ့တဲ့လမှာ Apple ကို ကျော်တက်ပြီး၊ ကမ္ဘာ့ဒုတိယမြောက်အကြီးဆုံးဖုန်းကုမ္ပဏီဖြစ်လာတဲ့ ပြိုင်ဘက် Huawei ကတော့ Apple ရဲ့ အလွဲလေးကိုပဲ အမိအရဖမ်းဆုပ်ကာ၊ မကြာမီမိတ်ဆက်တော့မယ့် သူတို့ရဲ့ Flagship ဖုန်းမော်ဒယ်တစ်ခုကို ကြေငြာလိုက်ပါတယ်။ Huawei Mobile SG ကနေ Facebook ပေါ်မှာ တင်ခဲ့တဲ့ ၁၂ စက္ကန့်စာ ဗီဒီယိုလေးမှာတော့ ဂျိုကာတစ်ယောက်ဟာ သူ့မျက်နှာနဲ့ ဖုန်းကို ဖွင့်ဖို့ ကြိုးစားနေတာကို တွေ့မြင်ရပြီး၊ Facial Recognition Software ကနေ “မျက်လုံး”၊ “နှာခေါင်း” နဲ့ “ပါးစပ်” တို့ကို ညွှန်ပြနေတာ တွေ့မြင်ရပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဂျိုကာဟာ Face Unlock လုပ်လို့မရခဲ့ဘဲ၊ Failed Try Again ဖြစ်သွားခဲ့ပါတယ်။
ဒီဗီဒီယိုမှာ ဘယ်သူ့ကိုမှ တိုက်ရိုက်မရည်ညွှန်းပေမယ့်၊ ဘယ်သူ့ကို ရည်ရွယ်တယ်၊ ဘာကို ရည်ရွယ်တယ်ဆိုတာ ကျနော်တို့အားလုံး သိပြီးဖြစ်ကြမှာပါ။
ဗီဒီယို Description မှာတော့ “Let’s face it, facial recognition isn’t for everyone. Unlock the future with #TheRealAIPhone. 16.10.2017” လို့ ရေးသားထားပါတယ်။
ဒီဗီဒီယိုဟာ Huawei ကနေ အောက်တိုဘာလ ၁၆ ရက်နေ့မှာ မိတ်ဆက်သွားဖို့ရှိတဲ့ Mate 10 စမတ်ဖုန်းအသစ်အတွက် ကြော်ငြာဗီဒီယိုလေးပါ။ Mate 10 မှာ Neural Processing Unit လို့ခေါ်တဲ့ AI နည်းပညာပါဝင်တဲ့ ကိုယ်ပိုင် Kirin 970 Chipset ကို အသုံးပြုသွားမှာဖြစ်တယ်လို့ သတင်းတွေထွက်နေပြီး၊ Huawei ကိုယ်တိုင်ကလည်း iPhone မိတ်ဆက်ပွဲမတိုင်ခင်ကတည်းက သူ့ Mate 10 ဟာ iPhone 8 ထက် ပိုမိုကောင်းမွန်မှာဖြစ်တယ်လို့ ထုတ်ပြောခဲ့ဖူးပါတယ်။ ဒါပေမယ့် Apple တကယ်တမ်း မိတ်ဆက်ခဲ့တာက iPhone 8 နဲ့ 8 Plus ကော iPhone X ပါ ဆိုတော့ Huawei ပြောတဲ့ဖုန်းက 8 ကို ရည်ရွယ်တာလား X ကို ရည်ရွယ်တာလား မသေချာပေမယ့်၊ အခုအတိုင်းဆိုရင်တော့ iPhone X ကိုပါ Mate 10 က တိုက်ရိုက်ယှဉ်ပြိုင်ဖို့ ကြိုးစားမယ့် အနေအထားမှာရှိပါတယ်။ 10 ဆိုတဲ့ မော်ဒယ်နံပါတ်ချင်းပါ သွားတူညီသွားတာကတော့ တိုက်ဆိုက်မှုသက်သက်ပါ။
ဒီဗီဒီယိုအတိုင်းဆိုရင်တော့ Huawei ဟာ Mate 10 စမတ်ဖုန်းမှာ AI နည်းပညာကို တွင်တွင်ကျယ်ကျယ်အသုံးပြုသွားဖို့ ရှိနေပြီး၊ Face Unlock Feature တစ်ခု ပါဝင်လာမလားဆိုတာကတော့ သေချာပေါက်မသိရသေးပါဘူး။
Apple ရဲ့ iPhone X ဟာ TrueDepth Camera စနစ်နဲ့ 3D မျက်နှာပုံရိပ်ကို ဖမ်းယူကာ Unlock လုပ်ပေးတဲ့စနစ်ဖြစ်ပြီး၊ iPhone X က A11 Bionic Chip ဟာ AI နည်းပညာသုံး Machine Learning နဲ့ မျက်နှာပုံစံပြောင်းလဲမှုတွေကို မှတ်သားကာ၊ ဖုန်းကို Unlock ပေးနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
အရှိအတိုင်းပြောရမယ်ဆိုရင် ကျနော်သိသလောက် Apple ကနေ ပြိုင်ဘက်စမတ်ဖုန်းကုမ္ပဏီတွေကို ပေါ်တင်ဖဲ့တာမျိုး မရှိသလောက်ရှားပေမယ့်၊ ပြိုင်ဘက်ကုမ္ပဏီတွေကတော့ Apple ကိုပဲ ဝိုင်းဖဲ့နေတာမျိုးက တော်တော်မှားတဲ့ လုပ်ရပ်လို့ ထင်ပါတယ်။ ဒီလိုလုပ်လေလေ၊ Apple အတွက် နာမည်ရလေလေပါပဲ။ ဘာပဲပြောပြော ကြားထဲက ကျနော်တို့လိုပရိတ်သတ်တွေအတွက်ကတော့ ဒီပြိုင်ဆိုင်မှုလေးတွေက ဟာသလေးတွေပါပဲ။
Artificial Intelligence Huawei Machine Learning Huawei Mate 10 Apple iPhone X Face ID Huawei AI Mate 10